Nidaamka Dejinta Xisaabta Bangiga Dhexe
Dejinta Koonsalka ee Dibadda - Waxa la Qabanayo
Tallaabada ugu horreysa ee dejintaada akoonka bangiga waa inaad kala hadasho baahiyahaaga xirfadle khibrad leh. Tan waxaad ku samayn kartaa telefoonka ama khadka tooska ah. Gaar ahaan, waad u istcimaali kartaa nambarka ama foomka ku yaal boggan si aad toos ugula xiriirto lataliyaha.
Sidaas oo kale, waxaan dabooli karnaa macluumaadka aad u baahan tahay si aad u sameyso si aad ugu sameysato akoon bangi oo ku yaal dhulalka caanka ah. Kooxdayada xirfad-yaqaannada ah waxay gacan ka geysan karaan taageeridda furitaanka akoon bangi cusub oo dalka oo dhan laga sameeyo.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in bangiyada badankood ee xeebaha ka baxsan ay u baahan doonaan baritaan u qalma. Taasi waa qof horeyba xiriir ula leh bangiga. Nasiib wanaagse, ururkani wuxuu muta u-haye u hayaa hay'addo badan oo dhaqaale oo adduunka oo dhan ah.
Koontada bangi shisheeye waxaa loola jeedaa koontada bangiga ee xukunta halka saxiixa ama ka-faa'iideystaha koonti uusan ahayn muwaadin ama degane. Waxaan guud ahaan u tixraacnaa sharciyadan inay yihiin magaalooyin bangi sababtoo ah adkaynta adag ee ilaalinta sirta macaamiisha. Markaad furato koonto bangi oo ka baxsan mid ka mid ah awoodaha shisheeye ee wanaagsan, waxaad helaysaa aaminaad xagga dhaqaalaha ah.
Marka, sidee u kordhineysaa asturnaanta gaarka ah? Marka la soo gaabiyo, macaamiisheena badanaa waxay ku furaan xisaabtooda cusub magaca shirkadaha gaarka loo leeyahay ee aan aasaasno. Sababaha aasaasiga ah ee loo furayo xisaabaadka bangi shisheeye waa asturnaanta iyo ilaalinta hantida. Waxaa jira faaidooyin dheeri ah sida qorshaynta guryaha iyo sidoo kale maalgashiga caalamiga ah iyo ganacsiga. Faa'iidooyinkaani badanaa waxay u baahan yihiin aalad sharciyeed sax ah sida LLC-ka baddaha. Kuwa ugu caansan uguna faa'iidada badan kuwa raadinaya asturnaanta iyo ilaalinta hantida waa Nevis LLC.
Sida loo furo xisaab bangiyeedka ajnabiga ah
Bangiyada ajnabiga ah ee Moat waxay leeyihiin shuruudo aad u lamid ah marka aad furanaysid xisaabaadka. Bangiyada ayaa sidaas sameeya si ay u waafaqaan heerarka caalamiga ah. Tan waxaa ku jira macluumaadka adiga kugu saabsan, aqoonsiga iyo lacag dhigashada bilowga ah. Waxay kuxirantahay hay'addaada maaliyadeed, bangigu wuxuu ku weydiin karaa nuqulada baasaboorkaaga, tixraacyada iyo caddeynta deganaashahaaga. Waxaan awoodnaa inaan albaabka u furi karno bangiyada shisheeye ee dunida ugu xoogga badan. Sababo la xiriira khibradda ballaaran iyo cimriga dheer ee duurka, waxaan xaq u leenahay in aan soo bandhignono bangiyo badan oo Switzerland ugu waaweyn uguna xoog badan.
Marka hore, waxaad sameyneysaa shirkad shisheeye. Markaa, waxaad ku furaysaa koontada magaca ganacsiga. Tani waxay ku furaysaa akoonkaaga bangi ee dibedda magaca shirkad gaar loo leeyahay ee ka shaqeysa badda halkii laga isticmaali lahaa magacaaga shaqsiyeed. Markaad hanti ku leedahay magacaaga si toos ah, iyaguba waa bartilmaameedyo aad u fudud oo ah dacwadaha.
Intaas waxaa sii dheer, waxaad heli kartaa kororka asturnaanta maaliyadeed markaad adeegsato laba xukun oo shisheeye. Waxaad shirkad ka sameysanaysaa hal waddan. Markaa akaawnkaaga bangiga ka furaysaa mid kale. Waxaa muhiim ah, inaad ka faaiideysaneyso laba sharci oo gaar ah oo shisheeye oo kaladuwan. Xukummada bangiyada ee la door bidaayo, waa dambi weyn in la siiyo macluumaadka macaamiisha macluumaadka kuwa kale. Xeerarka kale sidoo kale waa dambi in qof uu bixiyo macluumaad ku saabsan lahaanshaha shirkaddaada. Shirkadda iyo isku-darka akoonka bangiga ayaa ah mid ka mid ah qaababka ugu dhaqsaha badan ee looga ilaaliyo hantidaada indhaha indhaha. Macluumaad dheeri ah, aqriso, Tilmaanta Bilowga Bangiga ee Xeebaha, halkaas oo aad ka arki doonto macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan bangi xeebta.
Bankiga Dhexe ee Dacwada Diidmada
Komishanka Adeegyada Maaliyadeed (FSC) ama hay'ad u dhiganta waddankaas ama gobolkaas ayaa nidaamiya bangi kasta. Gudaha, Ururka Iskaashiga Dhaqaalaha iyo Horumarinta (OECD), Midowga Yurub, iyo ururada kale, waxay soo bandhigaan talooyin iyo shuruudaha. Waxay diyaar u yihiin FSCyada kala duwan inay dhaqangeliyaan oo bangiyada ay raacaan.
Sababta ugu weyn ee xeerarkaan ayaa ah in laga ilaaliyo muwaadiniinta sharciga raacaysa iyo dambiilayaasha inay ka fogaadaan nidaamka maaliyadeed. Taasi waa sababta ay u jiraan shuruudo adag si looga caawiyo ka hortagga lacagta la dhaqay ama howlaha kale ee sharci darrada ah.
Halkan waxaa ah qaar ka mid ah walxaha caadiga ah badanaa waa lagama maarmaan marka la tixgelinayo bangiga badda. Bangigu wuxuu macluumaadkan ugu yeedhaa "dadaalka saxda ah" ama la kulanka "Macaamiishaada Ogow" ama shuruudaha KYC.
Waxa Bangiyadu U Baahan Yihiin
Halkan waxaa ku yaal tusaale qaar ka mid ah ashyaada ay u baahan yihiin sharciga.
1. Codsiga xisaabta bankiga.
2. Kaarka saxeexa
3. Nuqul sawir leh oo baasaboor ah
4. Caddeynta cinwaanka, sida biilka korantada
5. Tixraaca Bangiga Warqad ka socota bangiga oo qofkii khaaska ah uu lahaa xidhiidh ganacsi bangi ugu yaraan laba sano
6. Tixraaca Tixraaca Xirfadda Laga bilaabo xisaabiye / Xeerilaaliye oo lala xidhiidhay qofkii ku habboonaa xiriir xirfadeed leh ugu yaraan laba sano
Tan micnaheedu maahan liis dhammaystiran. FSC iyo OECD iyo bangiga, lafteeda, ayaa yeelan kara shuruudo dheeri ah. Mar labaad, tan waxaa loola jeedaa in la ilaaliyo hufnaanta iyo sharci ahaanta nidaamka bangiyada loona caawiyo ka hortagga dambiga. Saraakiisha Baanka waxay si buuxda u hubin doonaan dukumintiga waxayna sameyn doonaan wicitaano taleefan si ay kuugu sheegaan inaad soo gudbisay tixraacyo ansax ah.
Tusaale ahaan, waxay rabaan inay hubiyaan deganaanshahaaga jir ahaaneed. Marka, waxaad ubaahantahay nooc cadeyn ah, sida biilasha utility ee magacaaga. Iyada oo ku xidhan nooca dukumintiga kasta, nootayeynta ayaa cadeyn karta in loo baahan yahay. Wadamada qaarkood waxay waliba ubaahan karaan qaabab kala duwan oo aqoonsi ah ka hor intaysan furan akoonka.
Markaad furato koonto bangi oo dibedda ah, waad kireysan kartaa xirfadle kaa caawin doona inaad sidaa sameyso. Tusaale ahaan, hay'addeenna ayaa bixisa adeeggan. Haddii kale, waxaad u baahan doontaa inaad baartid shuruudaha gaarka ah ee xukun kasta ama bangi kasta uu farayo. Qiyaasta Quora ayaa ku saabsan 14,600 bangiga adduunka. Marka, haddii aadan waqti badan gacmahaaga ku jirin, badankood waa ku raacsan yihiin inay ugu wanaagsan tahay inaad hesho khibrad khibrad leh.
Tixraacyada iyo Dukumentiyada
Marka laga hadlayo tixraaca bangiyada, banki-dibadeed wuxuu u baahan karaa caddeyn xiriir wanaagsan oo dhexmara adiga iyo bangigaaga. Waxaa laga yaabaa inay rabto macluumaad sida dheelitirka maalinlaha ah. Xaaladaha badankood, lix bilood ilaa sanad qiimahoodu waa inay ku filnaadaan. Bangigaaga gudaha wuxuu kaloo caadi ahaan bixin karaa warqad tixraac ah oo cadeynaysa inaad tahay macmiil xaalad wanaagsan.
Bangiga dibedda wuxuu kaloo laga yaabaa inuu rabo macluumaad ku saabsan nooca iyo nooca macaamillada aad qorsheyneyso inaad sameyso. Bangiyada ayaa waxaa soo food saaray cadaadis sii kordhaya si ay u joojiyaan lacag laynta iyo howlaha kale ee sharci darrada ah. Sidaa darteed, dukumiintigaan dheeriga ah waxaa loo codsaday si hay'addu u ogaato ilaha maalgelinta ee koontada. Haddii aysan sidaa yeelin, waxay la kulmi karaan ganaax ama luminta shatiga baanka. Marka, ha ka fileyn inay kuu sameeyaan wax gaar ah mooyee.
Ingiriisku ma tahay luuqad rasmi ah oo wadanka ah oo aad qorsheyneyso inaad furto xisaabtaada bangigaaga? Haddii aysan ahayn, waxaa laga yaabaa inaad turjumid dukumiinti ah ku bixiso luqada rasmiga ah.
Sidaad arki karto, hannaanka dejinta akoontada bangi ee bannaanka ayaa ka duwan furitaanka xisaabta gudaha. Baananka badankood waxay kaa rabaan inaad adigu qof ahaan u timaadid. Nasiib wanaag, waxaan ognahay kuwa aan aqoon. Kuwa aan u baahnayn safarka, waxay u baahan doonaan dukumiinti dheeraad ah si ay u caddeeyaan inaad tahay qofka aad tiraahdo waxaad tahay. Tani waxay kuu tahay adiga waxtarkaaga. Taasi waa sababta oo ah marka aad soo xaadirto weydiisiga lacagtaada, waad ogtahay inay kuu taabanayso oo keliya; ma aha qof sheeganaya inay yihiin adiga. Markaa, adoo siinaya aqoonsi sax ah dhanka hore, adiga iyo baanka ayaa ogaan doona inay runti idinka tahay.
Maadaama ay hawluhu kala duwan yihiin bangiyada iyo waddanka, waxaa muhiim ah in la caddeeyo arrimaha qaarkood kahor intaan la furin xisaabta. Waxaad dooni doontaa inaad ogaato halka ay jiraan xayiraadyo lagu bedelayo lacag aad u tiro badan. Sidaa darteed, waxaad u baahan doontaa inaad ka warqabto hababka loo oggol yahay. Waxaad sidoo kale rabi laheyd inaad ogaato haddii kaadhka bangiga uu ka shaqeyn doono caalamka. Miyuu u shaqeeyaa labadaba iibsashada tafaariiqda iyo ATM-yada? Soo ogow haddii aad isticmaali kartid kaadhka deynta ah si aad ugu bixisid badeecada internetka iyo adeegyada.
Qiimaha dulsaarka badan ee bangiyo shisheeye ay bixiyaan ayaa mararka qaar ka sarreeya kuwa ay bangiyada Mareykanku bixiyaan. Qaab dhismeedka lacagta ayaa waliba laga yaabaa inuu waxyar ka sarreeyo. Qayb ka mid ah fulinta taxadarka waajibka ah ayaa tixgalinaya dhammaan khidmadaha uu bangigu kaa qaado. Haddii aadan qorsheyneynin inaad ku sameyso xawaalado badan, waxaa laga yaabaa in ajuuradaha aysan fara badan ku yeelan doonin; laakiin waxay ku dari karaan koonto bangi aad u firfircoon.
Marka Aqoonsigaagu Furan yahay
Marka ay hay'addu ka baaraandegto akoonka bangiga dukumiintiga dejinta, caadi ahaan waxay kuugu soo diraan xaqiijinta emayl ahaan. Waqtigaas bangigu wuxuu sugi doonaa wareejinta silig. Markii ay helaan deebaajiga bilowga ah way dhaqaaqi doonaan koontadaada cusub. Kharashaadka qaar waxaa ka mid ah khidmadda furitaanka, kaararka bangiga oo dheeraad ah (haddii lagu dabaqi karo), warqadda dirista iyo kharashyada kale. Mar labaad, kuwan waxay ku kala duwanaan doonaan shirkadaha bixiya xisaabta bannaanka.
Mar haddii koontada bangigu shaqeynayso, waxaad caadiyan ku heli kartaa marinka internetka si aad u abuurto koontadaada isticmaale iyo eraygaaga sirta ah. Waxa kale oo aad heli kartaa waxyaabo ay ka mid yihiin aalad saxeex dhijitaal ah oo si fudud loo adeegsan karo. Markaad heshid, waxaad arki kartaa aalad dijital ah oo dhalisaysa koodh sugan si aad uhesho dheelitirkaaga koontada. Bangiyada badankood, waxaad awoodi doontaa inaad si dhaqso leh u sameyso macaamil xawaalad, si fudud, si gaar ah oo aamin ah. Marka, ka shaqaynta koontadaada iyo ka faa iideysiga khadka tooska ah waxay ka dhigantahay mid aad ula mid ah isticmaalka bangiga wadada.
Caawinaad ayaa halkan taal
OffshoreCompany.com ayaa ka caawisay kumanaan kun oo dad ah oo adduunka kunool ah inay aasaasaan akoonnada bangiyo ka baxsan. Intaas waxaa sii dheer, waxaan gacan ka geysaneynaa sameynta akoonno lacageed oo khaas ah. Waxaa intaa dheer, ururkani waa mid ka mid ah shirkadaha ugu horreeya ee bixiya qorshayaasha ilaalinta hantida. Markaa, waxaan nahay bixiye aamin ah oo xiriir la leh awoodaha xeebaha saxda ah. Haddaad jeceshahay inaad kaqaybqaadatid bangiyo shisheeye, hubi inaad naftaada u sheegtid si aad u gaarto go'aanka saxda ah. Taasi waa waxa aan kaa caawin karno inaad sameyso.
Faa'iidooyinka Xisaabaadka Bangiga Dibadda
Bangiyada shisheeyuhu badanaa waxay bixiyaan khidmad dulsaar oo ka wanaagsan bangiyada Mareykanka iyo Kanadiyaanka. Ku darso adeegyo badan oo xisaabiye maalgashi maamuli kara. Ku darista asturnaanta waa mid faa iido u leh bankiyo ka baxsan. Mid kale ayaa ah fursadda maalgashi shisheeye oo la heli karo. Ku darista akoon bangi shisheeye iyo qalab ilaalin hanti waa hab wanaagsan oo aad naftaada ku ilaalin karto dhaqaale ahaan. Haddii aad koonto ku leedahay oo keliya magacaaga, difaac laguuma helayo. Taasi waa, garsooraha deegaanka ayaa kugu amri kara inaad wareejiso lacagaha. Ku haynta akoonkaaga meel ka baxsan xeebta LLC ama aaminka hantida, si kastaba ha noqotee, miisaska ayey isu rogaysaa. Markaad sidaa sameyso waxay ka horjoogsaneysaa qareenka kaa soo hor jeeda inuu boobo koontadaada.
Bangiyada Dibadda, Qadka Hooska
Koonto bangi oo dibedda laga leeyahay micnaheedu waa, bangi hay'ad maaliyadeed oo ku saleysan waddan aan ahayn kanaga. Bangiga debeddiisa ee Mareykanka sida caadiga ah macnaheedu waa meel amaan ah oo caan ah dhaqaale. Meelahaas waxaa ka mid ah Switzerland, Jasiiradda Cayman, Belize iyo Luxembourg. Sidaas awgeed.
Sida aan soo sheegnay, adeegsiga koonto bangi dibedda ah waxay la mid tahay adeegsiga koontada gurigaaga. Taasi waa, bangiyada dibedda waxaa laga heli karaa mashiinnada ATM-ka iyo maaraynta koontada internetka.
Xisaabaadka Bangiyada Dibadda oo ay la socdaan hay'adaha maaliyadeed ee ugu ammaansan uguna xoogga badan adduunka. Adeegso mid ka mid ah lambarrada taleefannada ama foomka wada-tashiga ee boggan ku yaal si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Faa'iidooyinka Bangiga dibada
Ilaalinta Hantida Hantida ee Sharciyada
Wuxuu albaabada u furayaa Maalgashiga Dibad-bixinta ee Soo-jeeda
Halkan waxaa ku yaal hal tilmaame oo weyn oo kaa caawin doona inaad kordhiso asturnaanta maaliyadeed iyo ilaalinta hantida. Taasi waa, furo koontada bangiga dibadda ee magaca shirkadda xeebaha. Tani waxay bixisaa sirta si weyn loo xoojiyay sirta dhaqaalaha. Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu kordhiyo sirtaada loona ilaaliyo hantidaada. Si fudud isugu dar akoonnada bangi ee dibedda, shirkadaha iyo shirkadaha waaweyn. Tusaale ahaan, qawaaniinta Nevis LLC waxay bixiyaan ilaalinta hantida ugu adag ee LLC kasta aragtideena. Intaa waxaa dheer, in kiiska sharciga ah uu tilmaamayo 'Cook Islands Trust' oo ah aaladda wax ku oolka ah ee ilaalinta hantida shisheeye ee nooc kasta ha noqotee.
Sidaad ogtahay, ilaalinta hantidaada iyo asturnaantaada lacageed weligeed muhiim ma'ahan. Nasiib wanaagse, waxaad ku raaxeysan kartaa asturnaanta asturnaanta iyo gawaarida ilaalinta hantida ee gobollada amnigaba ugu ammaansan. Bixiyeyaasha sida annaga oo kale ah waxay dhisaan kumanaan shirkado ganacsi ee xeebaha ka shaqeeya maalin walba macaamiishooda. Milkiileyaashooda cusub, iyagana, waxay malaayiin doolar ku shubayaan akoonnada bangi ee dibedda sannad walba. Iyada oo ah mutacalin mutacalim ah bangiyada ugu adag Switzerland, wuxuu ururkani caawiyay kumanaan kale oo ka mid ah la shaqeynta bangiyada dibada. Taasi waa, ururkani wuxuu ka caawiyaa iyaga inay furaan akoonno bangi oo dibada ah. Sidaas oo kale, waad ku furi kartaa kayd hoose oo bilow ah markii xirfad yaqaan khibrad leh uu hogaaminayo.
The IRS cashuura dadka Mareykanka dakhliga adduunka. Marka, hubso inaad raadsato hagida 'CPA' oo ku siin kara talo canshuurta oo macquul ah. Ma waxaad dooneysaa qaab sharci ah oo lagu ilaaliyo hantida? Ma waxaad ku shaqeysaa qaab anshax iyo sharci ahaanba waafaqsan? Hadday sidaas tahay, xor u tahay inaad isticmaasho lambarka ama foomka lagu bixiyay boggan.
Ujeedooyinka sharciga ah kaliya
Waxa kor ku xusan ayaa la yiri fahamka in shirkadda iyo koontada bangiga loo isticmaalo ujeeddooyin sharciyeed keliya. Guud ahaan, dadka Mareykanka waxaa laga qaadaa dakhliga adduunka. Marka, ka ilaalin hanti in laga xumaado, walwal leh inta badan dacwadaha waa la aqbali karaa. Si kastaba ha noqotee, ka-lunsiga canshuuraha ama u isticmaalida waxyaabaha kor ku xusan si ay u difaacaan lacagaha sida sharci darrada ah lagu helay ma aha ujeeddada qodobkan. Marka, waxaan u qaadaneynaa inaad tahay muwaadin sharciga dhawra oo leh anshax wanaagsan. Hadday haa tahay, adeegsiga adeegyadan kor ku xusan waxay bixin kartaa dhawritaanka maaliyadeed iyo ilaalinta hantida ee aad raadineysay.
<Illaa cutubka 7
Ilaa cutubka 9>